SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, famakafakana sy hevitra | Androidsis
Alfonso de Frutos | | hevitra, Takelaka Android
Indraindray ny famindrana angona avy amin'ny solosaina mankany amin'ny fitaovanao Android dia fampijaliana: olana amin'ny fampifandraisana, ny filàna mametraka rindrambaiko izay tsy tadiavinao mba hahafantaran'ny PC ny finday finday na takelakao ... Izany no antony rehefa eo fanontana farany an'ny IFA tany Berlin dia nanana fotoana nisedra ny fahatsiarovana USB aho SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, Noheveriko fa mety hanampy be ity vahaolana SanDisk vaovao ity.
Te hamindra sary, horonan-tsary, mozika na antontan-taratasy rehetra amin'ny solosainao amin'ny findainao na ny takelakao ve ianao nefa tsy mila mampifandray azy ireo? Aza adino ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 famerenana, ny famenon-tsakafo mety indrindra ho an'ny finday finday Android.
1 Volavola tsotra sy mahomby
2 Ahoana no fiasan'ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0
3 Hafainganana famindrana mahagaga
3.1 Mampiasa USB 2.0:
3.2 Mampiasa USB 3.0:
4 Fehiny farany
6 Isa manohana
7 Hevitra manohitra
Volavola tsotra sy mahomby
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 dia fitaovana tena matanjaka. Nail mirefy 11 x 19.8 x 36.6 mm, mazava be fa io memoara USB Flash ho an'ny fitaovana Android io dia manana habe kely dia kely.
Ny vatany, vita amin'ny polycarbonate, manolotra fikasihana mahafinaritra izy, amin'ny ampahany noho io volotara io izay mampifangaro ny ampahany amin'ny vatany ary manome ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 endrika tena manintona. Araka ny ho hitanao dia manana bokotra mihetsiketsika amin'ny iray amin'ireo lafiny izy. Ity bokotra ity dia mety ho cmifamadika eo anelanelan'ny mpampitohy USB 3.0 sy ny mpampitohy Micro USB.
Ity bokotra ity Vita amin'ny plastika izy io ary sarotra ny zatra ny mekanisma ao aminy satria ny kalitaon'ny famaranana dia tsy ny tsara indrindra. Mazava ho azy, andeha hotadidintsika fa ny maodely efa nohalalinintsika, ny kinova 32 GB, 11.90 euro ny vidiny any Amazon. Amin'ity vidiny ity dia tsy afaka manantena ny famaranana premium ihany koa isika.
Rehefa avy nampiasa an'ity memo USB ity nandritra ny iray volana aho dia efa zatra ny bokotra ary miova amin'ny USB mankany Micro USB tsy misy olana lehibe. antoka famolavolana mihoatra ny marina sy mifanaraka amin'ny antenaina andrasana amin'ny vokatra misy ireo toetra ireo.
Ahoana no fiasan'ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0
Ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 USB Flash Drive tsy ampoizina izany rehefa mampifandray azy amin'ny findainao Android satria ekeny avy hatrany fa flash driveraha mbola misy ny fanohanan'ny OTG ny telefaoninao.
Na dia marina aza fa ny ankizilahy SanDisk dia namorona rindranasa tena feno hampiasa ny fahatsiarovanao USB, ny zava-misy raha afaka mampifandray ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 amin'ny finday na tablette Android misy anao ary tsikaritr'izy ireo ho fahatsiarovana an-flash amin'izao fotoana izao dia teboka tena tsara.
Ny famindrana izay rakitra rehetra avy amin'ny telefaona mankany amin'ny flash drive na ny mifamadika amin'izany dia tena tsotra sy mahazo aina satria afaka mampiasa rakitra mpikaroka ianao, matetika aho dia mampiasa ASTRO ary tsy nanana olana aho.
Raha te hampiasa ny fampiharana ofisialin'ny mpanamboatra ianao dia teneno izany SanDisk Memory Zone dia misy ao amin'ny Google App Store. Ny interface intuitive dia ho hitany eo no ho eo ny rakitra rehetra anananao amin'ny telefaona ary handamina azy ireo amin'ny sokajy (sary, horonan-tsary, audio…) hahafahanao mandamina ny tenanao. Azonao atao ihany koa ny manamboatra kopian'ny backup amin'ny findainao amin'ny flash drive haingana sy mora amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra tokana sy fisafidianana izay tianao hotehirizina.
Hafainganana famindrana mahagaga
Niezaka ny hamindra ny karazan-drakitra rehetra aho, avy amin'ny fisie kely mankany amin'ny sarimihetsika milanja efa ho 2 GB ary mila milaza aho fa ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 dia nahavita tamina naoty izay manome mihoatra ny tahan'ny famindrana.
Mampiasa USB 2.0:
Ny haavon'ny hafaingan'ny fanoratana dia 20 Mbps
Ny haingam-pandeha vakiana dia 33 Mbps
Mampiasa USB 3.0:
Ny haavon'ny hafaingan'ny fanoratana dia 32 Mbps
Ny haingam-pandeha vakiana dia 115 Mbps
Notsapaiko ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 nandritra ny iray volana ary hitako fa fitaovana ilaina io. Ny zava-misy amin'ny maha plug and play system ahy dia manamora kokoa ny asa ary, ohatra, nampiasa ny fahatsiarovana USB aho hijerena sinema nefa tsy misy olana. Ho fanampin'izay, ny fampiharana ofisialy azy dia tena feno ary miasa tanteraka, manome interface mora sy mora.
La Ny hafainganan'ny famakiana sy ny fanoratana dia toa tsy marina loatra. Na dia marina aza fa afaka mahita vahaolana hafa manome valiny tsara kokoa isika, dia miakatra be ny vidiny ka mieritreritra aho fa tena mahay mandanjalanja tokoa ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 amin'io lafiny io.
Raha mila mitsikera zavatra iray aho dia hifantoka ny bokotra izay ampiasaina hivadika eo amin'ireo mpampifandray USB sy Micro USB satria toa malefaka tamiko izy ary sarotra ny zatra ny zotra misy azy. Saingy ratsy kely kokoa izy io izay mihoatra ny ambin'ireo endri-javatra ary indrindra amin'ny vidiny feno onitra.
Ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Izy io dia efa misy eny an-tsena miaraka amin'ny fikirakirana samihafa izay ho tanisiko:
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 16GB Mainty 7.90 euro amin'ny Amazon
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 32GB Mainty 11.90 euro amin'ny Amazon
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 32GB White 12.99 euro amin'ny Amazon
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 64GB Mainty 18.99 euro any Amazon
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 128GB Mainty 35.99 euro amin'ny Amazon
Volavola tsotra sy mora ampiasaina
Alefaso haingana kokoa noho ny marina ny hafainganana
Mora be ny mampiasa azy: plug and play
Toa malemy ilay bokotra ary sarotra ny zatra ny dia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, flash drive ho an'ny finday avo lenta na takelaka
Julz G Fuentes dia hoy izy:
Tena tsara, atolotra
Valiny tamin'i Julz G Fuentes
+1 Fampahalalana mangatsiaka. Misaotra indrindra!
Lahatsoratra bebe kokoa toa an'ity, ok? Toy ny hoe manaiky ianao!